Amin`ny maha olo-pirenena feno no hanomezana izay zo izay, ka afaka mifidy malalaka tsara ny olona. Adidy ihany koa, satria ny fifidianana filoham-pirenena no fifidianana goavana indrindra ao anatin’ny rafitra demokratika. Antony, ao anatin’ny dimy taona ny filoham-pirenena no hitantana ny firenena. Ao anatin’ny dimy taona ihany koa no tokony hanatanteraka ny praograman’asany izy, izay tena antony hifidianana azy. Mety hiteraka fahavoazana goavana ihany kosa, ho an’izay olona tsy hifidy ny tsy fanatanterahana an’izany adidy masina izany, satria ao anatin`ny dimy taona isika no hiaina ny vinan’ilay olona nofidian’ny hafa, satria ianao tsy nifidy ! Ny CENI rahateo dia miezaka hatrany manentana ny rehetra mba hanatrarana ny tahan`ny mpifidy ho 70% amin`ity fifidianana 2018 ity. Mila sahy mijoro sy mandray andraikitra ny olom-pirenena ka maneho am-piheverana tsara ny safidiny, safidy atao amin’ny fifidianana izay zo miteraka adidy aman’andraikitra.